I sii wakhti firaaqo waxaa la aasaasay 2017 iyada oo ujeedadu tahay keenista falanqaynta iyo wararkii ugu dambeeyay ee dunida filimada isticmaalayaashayada Internetka. Halkan waxaad ka heli doontaa maqaallo aad u tiro badan oo ku saabsan filimada maaddooyinka oo dhan, iyo sidoo kale adduunka muusikada. Laga soo bilaabo taariikhda muusikada, abaalmarino muusig, oo dhex maraya wararkii ugu dambeeyay ee kooxaha ugu khuseeya waqtigeena iyo kuwii hore.
Dhammaan maqaalladan waxaa soo saaray kooxdayada qorayaasha ah ee cajiibka ah, oo aad hoos ka arki karto. Haddii aad rabto inaad ku biirto waad nala soo xiriiri kartaa foomka soo socda. Haddii, dhanka kale, aad rabto inaad aragto dhammaan mowduucyada lagu daboolay goobta oo ay soo abaabuleen qaybo, waad booqan kartaa boggan.
Waan jeclahay filimada iyo muusikada. Had iyo jeer waxaan u fiirsadaa siidaynta cusub, ha ahaato internetka, majaladaha, ... wax kasta! Mid ka mid ah qorshayaasheyda ugu fiican ayaa ah inaan galab caajis ah la qaato qof aad jeceshahay ... Waa kan ugu fiican. Aniguna sidoo kale waan ku raaxeystaa qorista iyo wadaagida wax kasta oo aan ka qaban karo waxa ka socda adduunka madadaalada.